NY ASANAY - Transparency International - Initiative Madagascar
Transparency International-Initiative Madagascar (TI-IM) mametraka tetikasa sy hetsika mba hioarana amin’ny kolikoly manerana an’i Madagasikara.
Inona avy ireo asa azo tsapain-tànana ataon’ny TI-IM ?
Famokarana fandalinana mampisongadina ireo rafitry ny kolikoly
Manentana ireo manam-pahefana amin’ny fampiharana fanavaozana
Fanampariaham-baovao amin’ny haino aman-jery
Firesahana amin’ny mpamatsy vola ho fanohanana ny ady amin’ny kolikoly
Fiaraha-miasa amin’ny BIANCO, ireo OSC, ny sehatra tsy miankina, sns.
Fanentanana ny vahoaka amin’ireo voka-dratsin’ny kolikoly
Ahitana mpiasa 6 ny Birao Mpanantanteraka, miaraka amin’ireo mpikambana an-tsitrapo ary ny filan-kevitra mpitantanan-draharaha miandraikitra ny asan’ny fikambanana.
Ireo sehatr’asa ataon’ny TI-IM laharam-pahamehana amin’ity 2016 ity :
Sehatry ny Fananan-tany
Sehatry ny harena voajanahary
Ohatra amin’ireo asa natao farany sy mbola tontonsain’ny fikambanana :
Fametrahana ny taha-pahatsapana ny kolikoly (Indice de Perception de la Corruption – IPC) janoary 2016
Fandrindrana ny sehatra malagasy misy ireo fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny « Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) »
Fanadihadiana momba ny kolikoly tamin’ireo mpandraharaha nanangana orinasa ny taona 2015
Transparency International-Initiative Madagascar (TI-IM) dia manompana ny asany amin’ny sehatry ny fananan-tany mba hanatsarana ny fitantanana anatin’ny dingana arahina ara-panjakana. Kolikoly miteraka fatiantoka ho an’ny olom-pirenana maniry hanoratra ny tany amin’ny anarany ary koa ho an’ireo mpandraharaha te hamatsy vola izay tsy maintsy voatery handoa vola hafa noho ny vidin’ny tany tokony aloha hampandrosoana ny asany. Voamarika ho sehatra tena ahitana kolikoly ny sehatry ny fananan-tany araky ny tombatombana nataon’ny “Centre d’Assistance Juridique et d’Action Citoyenne (CAJAC) ny taona 2013.
Nametraka fitaovana hanatsarana ny fintantanana eo anivon’io sehatra io ny Transparency International, tamin’ny alalan’ny tetikasam-paritra “Ny Fananan-tany sy Kolikoly ao Afrika” (Foncier et Corruption en Afrique - LCA). Nanolotra hevitra voafantina ny TI-IM ary nanomboka nametraka ny tetikasa « Foncier et Corruption en Afrique » ny taona 2015, izay mbola miverina ny taona 2016
Asa natao voalohany ny fitadiavana antontan-taratasy sy ny firesahana mivantana tamin’ireo olona izay nandray anjara tamin’ny fanamboarana saritany mamaritra ilay sehatra, niampy fijerena ny lafiny lalàna sy ara-panjakana.
Hita ao anatin’ny ny tetikasa ny fiompanan’ny asa amin’ny “Lettre de Politique Foncière” (aout 2016) nataon’ny governemanta Malagasy. Faritra telo no voafantina tamin’ny fanantaterahana ny tetikasa, dia ny Faritra DIANA, Boeny ary Antsimo Andrefana, ny asa sasany moa efa mahakasika ny sehatra manerana ny nosy.
Natao tarigetra ny fiaraha-miasa akaiky amin’ireo tompon’nadraikitra mivantana sy ifotony mba hampivoarana ny fahazoana tany amin’ny ara-drariny sy tsy mitanila.
RAHA TE HADALINA BE BE KOKOA
Transparency International Secrétariat : Workingpaper: Land and Corruption, 2011
Raha te hahazo fanazavana fanampiny momba ny asa amin’ny sehatry ny fananan-tany, mandefasa mailaka amin’ny : srazafimahefa@transparency.mg
Manan-danja amin’ny toe-karena Malagasy ny harena voajanahary, dia ny ala sy ny harena ankibon’ny tany. Loza ho an’ny fitrandrahana sy fampiasana ireo harena ireo mba hampandroso ny toekarem-pirenena ny kolikoly, satria mampihena ny tombotsoa azo avy amin’ny hetra sy ny vola miditra amin’ny olona izany miankina ara-toekarena amin’io sehatra io. Manimba ny ho avin’ny taranaka ao aoriana ny vokadratsin’ny fitantanana ireo harena ireo tsy araka ny tokony ho izy.
Misy tetikasa volavolain’ny Transparency International - Initiative Madagascar iarahany amin’ny GIZ Madagascar amin’izao fotoana izao, mikendry ny fanamafisana ny fintantanana ara-dalàna ao amin’ny sehatry ny fitrandrahana ny ala sy ny harena ankibon’ny tany ataon’ny olon-tsotra.
Ny sehatra fitrandrahana ny ala ao amin’ny tetikasa no manohy ny asa nataon’ny TI-IM ao anatin’ny « Promotion de la transparence dans le secteur forestier : application dans les Régions Boeny et DIANA », notontosaina tamin’ny septambra 2013 ka hatramin’ny désambra 2014 niarahana tamin’ny PGM-GIZ.
Ny lafiny fitrandrahana harena ankibon’ny tany ao anatin’ny tetikasa indray dia mieritreritra ny TI-IM hanao fandalinana ahafahana manadihady amin’ny antsipirihany ny fifandraisan’ny kolikoly sy ny fomba fitrandrahana ataon’ireo mpanivana volamena ao Betsiaka (faritra DIANA) sy safira ao Sakaraha (faritra Atsimo-Andrefana). Hisy ihany koa ny Fangatahina ho tontosaina eny anivon'ny tompon'andraikitra ifotony, any amin'ny faritra ary anivon'ny firenena izay hiarahana miasa amin'ny BIANCO ( Birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly).
RAHA TE HAMAKAFAKA LALINA KOKOA
Harena azo avy amin’ny fitrandrahana ala
Transparency International : La corruption et les ressources naturelles renouvelables (amin’ny teny frantsay)
Transparency International : Manuel d'analyse de la corruption dans le secteur forestier de Transparency International (amin’ny teny anglisy)
GIZ Madagascar : Programme d'Appui à la Gestion de l'Environnement (PAGE) (amin’ny teny frantsay)
Alliance VoahagaryGasy (AVG) : Guide du citoyen: le droit minier en 50 questions et réponses (amin’ny teny frantsay sy malagasy) mars 2015
Institut International du Développement Durable : Rapport d’évaluation de Madagascar, Soutenir la mise en œuvre du Cadre directif pour l’exploitation minière dans les États membres du Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable: évaluation de l’état de préparation des pays à la mise en œuvre (amin’ny teny frantsay) Mars 2015.
U4 Anti corruption ressource centre : Les bonnes pratiques pour mitiger les risques de corruption dans le secteur des industries extractives (amin’ny teny frantsay) 2014
Raha te hahazo fanazavana fanampiny momba ny asa amin’ny sehatry ny harena voajanahary, mandefasa mailaka amin’ny : hrandriaarson@transparency.mg
Ny taona 2014 no nanombohan’ny Transparency International - Initiative Madagascar nijery ny olana ateraky ny kolikoly mianjady eo amin’ny sehatra tsy miankina, tamin’ny fanatanterahana ny tetikasa “Corruption in Antananarivo’s Public Services (CAPS)”, niarahana tamin’ny Ambassade du Royaume-Uni eto Madagasikara. 436 mpandraharaha ara-toekarena teto andrenivohitra no nanaovana fanadihadihana mba ahafahana mahazo atontan-kevitra azo antoka amin’ny fahitana ny traikefa ananan’izy ireo amin’ny kolikoly eto Madagasikara.
Tohin’io asa natomboka io, nahavita tetikasa madinika ny fikambanana ny taona 2015 sy 2016.
Voalohany tamin’izany ny tetikasa miompana tamin’ny fanantanterahana asa-panjakana eto Madagasikara, nanaovana fanadihadiana vaovao tamin’ireo mpandraharaha nahazo farafahakeliny asa-panjakana iray ny taona 2013 na 2014, nanasongadinana ny olana amin’ny dingana arahin’ny famindram-pahefana ho fanantanterahana asa-panjakana amin’ny ara-drariny sy mangarahara.
Ny tetikasa madinika faharoa notanterahin’ny TI-IM dia niompana tamin’ny foto-kevitra “ny kolikoly sy ny fananganana orinasa ». Natao an-tsoratra sy nanamarihana toro-làlana tamin’ny alalan’ny fametrahana karazana fitaovam-pikarohana ireo zavatra mety hitranga mandritra ny fanarahana ireo dingana ara-panjakana ilaina amin’izany, nanaovana fanadihadihana vaovao tamin’ireo mpandraharaha nanangana orinasa tamin’ny janoary ka hatramin’ny desambra 2015. Mbola hanaovana tatitra manokana ny valin’izany fanadihadihana izany ato ho ato.
Fahatelo sady farany, misy tetikasa eo andalam-panantanterahana dia ny fanamafisana ny fanarahan-dalàna sy mangarahara ny fandoavan-ketra ataon’ireo orinasa eto Madagasikara. Manaraka fomba fiasa miaraka, manome vahana ny fifapiresahana eo amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana, manana tanjona hanome vahaolana mivaingana momban’ny kolikoly mianjady amin’ny fandoavan-ketra eto Madagasikara. Afahana mampivoatra ihany koa ireo fahazarana tsara eo anivon’ny sehatra tsy miankina mikasika ny fanarahana ireo lalàna mifehy ny resaka hetra.
Raha te hahazo fanazavana fanampiny momba ny asa amin’ny sehatry ny fananan-tany, mandefasa mailaka amin’ny : secteurprive@transparency.mg